Amasayithi Wokulanda Imibhalo Engaphansi Engcono Kakhulu (2020) - Ezokuzijabulisa
Amasayithi Wokulanda Imibhalo Engaphansi Engcono Kakhulu (2020)
Imibhalo engezansi iyingxenye yempilo yethu yansuku zonke uma kukhulunywa ngokuzijabulisa. Kungasiza uma ubenakho ukulandela kalula izinhlelo zakho ozithandayo nama-movie. Kade sikhulisa ukusetshenziswa kwethu kwezokuzijabulisa isikhathi eside manje. Abambalwa bethu kungenzeka bangabi abalandeli abakhulu bemibhalo engezansi ngenxa yesithiyo abasilethayo.
Kulo mhlahlandlela, sibheka izinketho ezinhle ongazisebenzisa. Zama lokhu namuhla ukuze usakaze kokuqukethwe kwakho okuthandayo. Ukukhetha kwethu okuphezulu kuzokusiza ukuthi uhambe kahle kuzo zonke izidingo zakho zevidiyo. Bheka lapha bese usakaza manje.
Uhlu Lamasayithi Okulandwa Okuhamba Phansi Ahamba Phansi:
Imibhalo engezansi iyinsiza yansuku zonke kuwo wonke ama-Movie amakhulu futhi Imibukiso ye-TV . Abanye abantu bayayidinga ukuze baqonde kangcono imibukiso.Abantu abaningi bangahle bangaziqondi kahle izindlela ezahlukene zokukhuluma zesiNgisi. Kukusiza ukuthi uthole ukucaciseleka kungxoxo nakwisakhiwo. Lezi futhi ziyindlela enhle yokuthuthukisa umyalo oqinile phezu kolimi. Nawa amanye amawebhusayithi ahlukile anedatha enkulu yemibhalo engezansi okwamanje.
1. Vula imibhalo engezansi
Okuqukethwe -Imibhalo engezansi yama-Movie ne-TV
Iwebhusayithi evulekile yemibhalo engezansi idume kakhulu kubantu. Kuyinto iwebhusayithi yokuya ezigidini zabasebenzisi kwi-intanethi. Ungasakaza kalula okuqukethwe ngale pulatifomu. Abasebenzisi bangalanda imibhalo engezansi yamabhayisikobho athandwayo nawakamuva. I-interface yale webhusayithi iyadingeka impela. Sekuphele iminyaka eminingi isebenza futhi. Ungathola cishe wonke ama-movie athandwayo nezinhlelo ze-TV lapha. Iwebhusayithi inezincazelo nezici ezithile ezihlaba umxhwele.
Akukhawulelwe kubabukeli baseNgilandi. Ungalanda imibhalo engezansi cishe kuzo zonke izilimi. Abasebenzisi abalanda okuqukethwe ku-inthanethi bangasebenzisa le nkundla ukuze basakaze kalula. Ipulatifomu yomthombo ovulekile imahhala ngokuphelele ukuthi wonke umuntu ayifinyelele.Iwebhusayithi iphinde inikeze isandiso se-google chrome ukuze kutholakale kalula. Abasebenzisi bangayilanda ukuze ibonwe ngokushesha.
Iwebhusayithi igcwele izihlokwana ezingenakulibaleka ngokusebenzisa kwakho i-movie. Akukunikeli ngemibhalo engezansi ye-TV. Ungaqiniseka ukuthola imibhalo engezansi yama-Movie wakho kalula ngale nkundla. Siyincoma kubo bonke abafundi bethu. I-interface yomsebenzisi ilula kakhulu kubasebenzisi abajabulela ukusakaza okuqukethwe. Ine-database enkulu enokulanda okulula. Kunemibhalo engezansi ngazo zonke izilimi ezibalulekile ezitholakala kule webhusayithi.
Singasho ngokuphepha ukuthi zonke izidingo zakho zesihlokwana se-movie ziyasebenza lapha. Isici sokusesha senza ukulanda kwakho kube lula ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Ungathola imibhalo engezansi yamabhayisikobho angaphezu kwama-20,000 kuwebhusayithi. Lezi zihlukaniswe ngama-alfabhethi ukuze zicacelwe ngokuqhubekayo.
I-YTS Subs iwebhusayithi eyaziwayo ekunikeza imibhalo engezansi yakamuva yakho konke okulandwayo kwesifufula. Iwebhusayithi ethandwa kakhulu ene-database emnandi.Isayithi liphethe imibhalo engezansi yawo wonke ama-movie atholakala ku-Yify. Kuyasiza ekuvumelaniseni okulula kwemithombo yakho yomsindo nevidiyo.
Siyasithanda nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi. Kwenza iwebhusayithi ibelula ukubhekabheka lapho usesha ifayela lemibhalo engezansi. Abasebenzisi bangalanda okuqukethwe kwabo okuthandayo kusuka lapha kalula. Okuqukethwe kupulatifomu kusebenzisa izinhlobo ezilula nezinamakhono ezinhlobonhlobo. Ungazama futhi amasethingi olimi ahlukile.
Okuqukethwe -Ama-movie nemibukiso ye-TV
Iwebhusayithi engamanyala ikunikeza ngokuqukethwe kwamuva kalula. Abasebenzisi bangalanda kalula ama-subs abo abathandayo kusuka lapha. Iwebhusayithi ithola izibuyekezo ezijwayelekile maqondana ne- imibukiso ehamba phambili nama-movie .Ithuluzi lokusesha elilula kuwebhusayithi yabo. Abasebenzisi bangakha i-akhawunti kalula ukusindisa ukulanda kwabo.Kuyinsizakalo elula ngaphandle kwezinkinga ezinkulu. Sincoma ukuthi ujabulele ukusakazwa okuhle nokuzijabulisa ngale nsizakalo.
Umphakathi ungaphinde ulayishe ama-subs abo awathandayo kungxenyekazi. Kulula ukuyisebenzisa kunoma ngubani. Ungathola izibuyekezo ezisheshayo ohlangothini olungakwesokudla lwewebhusayithi. Kubandakanya nokuseshwa okuphezulu kwakamuva endaweni yesikhulumi. Ungahlola ukuthi yini manje ethrendayo esithangamini.
Okuqukethwe -Ama-movie, imibukiso ye-TV, namavidiyo womculo.
Iwebhusayithi yeSubDivx igcwele imibhalo engezansi evela kuwo wonke umhlaba. Iwebhusayithi yomhlaba wonke enakho konke okudingayo. Le webhusayithi kulula ukuyisebenzisela wonke umuntu. Abasebenzisi bangasebenzisa ipulatifomu ukulanda noma yikuphi okuqukethwe abakudingayo. Ukulungiswa okuhle kwezixazululo zakho zevidiyo nezomsindo.
Isakhiwo sewebhusayithi siwulimi oluhlukile. Iwebhusayithi inikezela nangemibhalo engezansi yamavidiyo omculo ngezinye izilimi. Isayithi lilungele bonke abasebenzisi abazama ukuqonda okuqukethwe okuvela nxazonke zomhlaba. Kuyisidingo sokwakha i-akhawunti kuwebhusayithi.
Okuqukethwe -Ama-Movie nezinhlelo ze-TV
Iwebhusayithi yemibhalo engezansi igcwele okuqukethwe okuvela nxazonke zomhlaba. Kulula ukubhekabheka usebenzisa isici sokusesha. Abasebenzisi bangabheka imibhalo engezansi etholakala ku-inthanethi kumabhayisikobho abawathandayo nemibukiso. Sincoma ukuthi uzame le webhusayithi ngosizo olulula lokusakaza.
Inokunye okuqukethwe okubucayi kakhulu kwi-intanethi. I-interface yomsebenzisi iyadingeka, kepha awudingi okuningi uma kukhulunywa ngokulanda imibhalo engezansi.
7. Imibhalo engezansi
Iwebhusayithi ithandwa kakhulu phakathi kwabantu abathanda ukubuka okuqukethwe okuningi. Kuyipulatifomu elula nokho esebenzayo egcina yonke into ilawulwa. Ungalanda imibhalo engezansi evela kuwo wonke umhlaba. I-interface yomsebenzisi iyamangalisa futhi iqinisekisa ukuthi unesipiliyoni esihle sokuphequlula.
Ungabhalisa epulatifomu njengomsebenzisi ojwayelekile. Imvelo yomphakathi igcina bonke abantu bezibandakanya futhi bekhuthele. Abasebenzisi futhi bangalayisha imibhalo engezansi yokuqukethwe kwabo okuthandayo kuleli sayithi. Umphakathi wesayithi yilona ogcina okuqukethwe kugobhoza.
Amasayithi wokulanda imibhalo engezansi awavamile ukuthola kulezi zinsuku. Abambalwa abakhethiwe banakho konke okuqukethwe okusebenzayo. Kungaba yinselele ukucinga imibhalo engezansi evumelanisa ngokuphelele umsindo wakho nevidiyo. Ngalesi siqondisi, sizama ukukunikeza izixazululo ezinhle kakhulu ezitholakalayo. Zama lokhu namuhla bese uhlangabezana nokuqukethwe kombhalo ongezansi ophelele.
INetflix App ye-Mac - Kungenzeka Yini?
imidlalo engavinjelwe 66 run 2
Isaphulelo sehhovisi le-microsoft labafundi
isiguquli se-youtube ku-mp3 mahhala
imibukiso ye-tv ukuze ubuke mahhala ku-inthanethi
ifika ebusuku stream putlockers
Uhlelo lokusebenza lokuguqula i-youtube kuya ku-mp3
izindlela zokubuka ama-movie wamahhala